FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BULLDOG - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika bulldog
Champ's Boss, lehilahy Bulldog anglisy fotsy roa taona, sary natolotry ny Champ Bulldogs
Lisitry ny alika mifangaro anglisy Bulldog mifangaro
Ny English Bulldog dia alika midadasika sy antonony ary matevina manana tongotra fohy. Ny vatana sy ny loha dia goavambe miaraka amin'ny hoditra fanampiny amin'ny karandohany sy ny handrina latsaka anaty vala. Manitatra hatrany amin'ny sisin'ny maso ny takolaka. Ny sakelaka dia malalaka, fohy ary pug misy fijanonana midadasika sy lalina. Ny orona mainty dia malalaka amin'ny vavorona lehibe. Milentika lalina ny maso maizina. Ny sofina raozy dia kely, manify ary avo eo an-doha. Ny valanoranony dia goavambe, lehibe sy malalaka ary toradroa misy molotra ambony mihantona. Ny nify dia tokony hanana manaikitra. Ny rambo dia mahitsy na visy ary entina ambany. Ny palitao fohy sy fisaka dia mahitsy sy malama ary marevaka. Ny loko amin'ny palitao dia misy brindle mena sy aloky ny brindle hafa, fotsy mafy, mena matevina, zana-trondro, piebald, mavo mavo na mena na fotsy voasasa na mifangaro amin'ireo loko ireo.
poodle fenitra fotsy amidy
Na dia mety hampatahotra aza ny fisehoan'ny Bulldog anglisy, dia anisan'ny alika malemy fanahy indrindra io. Mitovy ihany no hahitana azy mpiditra an-tsokosoko , ary vitsy no mety hiharan-doza amin'ny fihaonana akaiky amin'ny alika be herim-po handrahoana omby. Izy io dia nofaritana ho toy ny biby tena be fitiavana sy azo ianteherana, malemy fanahy amin'ny ankizy, saingy fantatra amin'ny herim-pony sy ny fahaizany miambina tsara. Bullheaded ary tapa-kevitra, ity karazana ity dia mety maharitra. Tsy mora kivy izy ireo. Alika be olona ny bulldogs, mitady ny fiheveran'ny olombelona ary tia ny kely rehetra azony !! Betsaka ny sain'ny olona no ilaina amin'ny fahasambaran'ny karazany. Mety ho Bulldog anglisy sasany somary manjakazaka ary mila tompona mahay maneho fahaiza-mitarika matanjaka sy mahatakatra fihetsika alpha canine . Bulldog izay mahatakatra ny toerany ao anaty fonosan'ny olombelona dia mahafinaritra sy azo atokisana amin'ny olona rehetra. Ity karazana ity dia tsara amin'ny biby fiompy ao amin'ny fianakaviana , fa ny sasany kosa mety hiady amin'ny alika hafahafa raha tsy mahita ny tenany ho mpanara-dia azy. Rehefa tanora ny Bulldogs dia feno tanjaka, saingy miadana rehefa mihalehibe. Mikiakiaka mafy be izy ireo, ny ankamaroan'ny olona manana fironana drool sy slobber ary mpihinana misavoritaka. Bulldogs izay mampiseho fihetsika miambina, toy ny fanaka miambina , sakafo, kilalao, na toerana hafa ao an-trano, na mahery setra amin'ny alika dia tsy manana olona izay mpitarika ny alika. Mitranga io fihetsika io rehefa avela handray azy ny alika. Ireo fihetsika ireo dia azo ahitsy rehefa manomboka mampiseho ny fitarihana mety ny tompony. Ny alika izay mahatsapa fa mila mitantana ny trano dia tsy faly toy ny alika mahafantatra fa mpanaraka olombelona izy ireo, satria manahirana tokoa ny alika mila mitazona ny 'olony' milahatra.
Haavony: manodidina ny 12 - 16 santimetatra (31 - 40 cm) (tsy misy haavo voatondro, fa ny Bulldog fohy kokoa kosa dia sarobidy kokoa rehefa aseho)
Milanja: Lehilahy 53 - 55 pounds (24 - 25 kg) Vehivavy 49 - 51 pounds (22 - 23 kg)
Mora miaina olana ny sasany, ny sasany manana fantsona kely ihany koa. Tsy mahita tsara ihany koa, maso serizy , mora tohina amin'ny hafanana amin'ny toetr'andro mafana na efitrano mafana sy fiara. Tena mangatsiaka be. Mora amin'ny fivontosan'ny sela . Ny lesoka fahaterahana dia mahazatra amin'ny andalana sasany. Mora tratran'ny aretin-koditra, olana amin'ny valahana sy lohalika. Mora mivalana, indrindra rehefa omena karazan-tsakafo hafa ankoatry ny sakafon'ny alika mahazatra. Ny alika kely dia matetika aterina amin'ny fizarana caesarian. Misy ny milaza fa noho ny haben'ny lohan'ny alika, na izany aza ny sasany milaza fa tsy hainao ny manavaka ny haben'ny lohan'ny Bulldog miaraka amin'ny haben'ny lohan'ny karazany hafa rehefa teraka ny zaza dia nilaza fa tsy ampy ny tohodrano no omena fotoana. hanandrana sy hanatitra voajanahary noho ny angano lehibe an-doha. Betsaka ny Bulldogs no manana ny risika amin'ny fananana asa malemy ary izany dia mety hampitombo ny mety hisian'ny caesarian.
Ny English Bulldog dia tsara amin'ny fiainana an-trano. Tena tsy miasa intsony izy ireo ao an-trano ary hanao tsara raha tsy misy tokotany. Alika anaty trano ity karazany ity. Ny bulldogs dia mahavita tsara indrindra amin'ny toetrandro mafana satria ny karazany dia afaka mangatsiaka mora amin'ny andro mangatsiaka ary manana olana amin'ny hatsiaka amin'ny andro mafana be.
Ny Bulldog anglisy dia mila raisina a mandeha isan'andro mba hanatanterahana ny instine canine primal azy hifindra monina. Ireo olona izay tsy mahazo izany filàna izany dia azo inoana fa hanana olan'ny fitondran-tena . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ampianaro izy ireo hiditra sy hivoaka ny varavarana rehetra sy ny vavahady aorian'ny zanak'olombelona. Ny Bulldog anglisy izay amin'ny endriny tsara dia afaka mihetsika haingana be mandritra ny fotoana fohy.
Salanisan'ny 8 taona. Ny sasany velona lava kokoa, fa ny sasany kosa velona amin'ny fotoana fohy kokoa.
Alika kely 4 - 5 vokatry ny lohan'ity karazany ity dia mora mila faritra caesarian izy ireo
Ny Bulldog Anglisy dia niorina tany amin'ny Nosy Britanika, nidina avy amin'ny mastiff Asiatic taloha. Nomena ny anarana hoe 'omby' ilay alika noho ny fampiasany amin'ny fanjonoana omby sy ny fijery matanjaka omby kely. Izy ireo dia mahery setra, masiaka ary be herim-po amin'ny hery hamelezana omby lehibe, izay nataon'izy ireo tamin'ny ady an-kianja talohan'ny nandraran'ny lalàna izany tamin'ny taonjato faha-19. Ny bulldogs dia hanafika avy any ambany ka hidina ao ambanin'ilay omby ary mikendry ny hatoka, ka manasarotra ny famelezan'ny omby azy. Bulldog ankehitriny dia manana toetra hafa tsy mitovy amin'ny an'ny razany, saingy mbola mitazona fanapahan-kevitra mafy.
Alika kely Bulldog anglisy
Sofi the English Bulldog amin'ny faha-9 taonany
Diesel ny brindle volontsôkôlà anglisy Bulldog amin'ny 5 taona
'Ity i Bruno Flores. Bulldog anglisy 9 volana izy. Tiany ny manenjika ny baoliny any an-tokotany ary miara-miaina amin'ireo fella. '
'Ny mayoranay Payne dia milalao miaraka amin'ny zanany.'
'Ity no Duke, Bulldog anglisy antsika, 2 taona. Nanapa-kevitra ny hametraka ny seza fialan'ny ankizy amin'ny seza izahay mba hisakanana an'i Duke tsy hiarina sy hatory eo amboniny. Eny, toy ny tapa-kevitra sy mafy loha amin'ny maha Duke azy dia nanapa-kevitra izy fa tsy misy hahasakana azy tsy hatory amin'ny seza 'seza' :) Alika mahafinaritra i Duke. Manana zazalahy kely 3 izahay ary miaraka amin'izy ireo i Duke. Mipetraka amin'ny toeram-piompiana iray izahay ary i Duke dia tsy manana olana amin'ny maha-alika fiompiana azy. Tiany ety ivelany ary manenjika ny saka fitahirizana ary manampy amin'ny soavaly. Tsy nanana olana ara-pahasalamana na hoditra niaraka taminy izahay sakafo mety ary hetsika ivelan'ny trano maro. Toa mpikambana mavitrika amin'ny fiompiana i Duke. '
Thabo the English Bulldog amin'ny faha-8 volana— 'Zanaka mahafinaritra tokoa izy. Tiany ny manana azy mandeha isan'andro ary mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy. Tena manana olana amin'ny farts izy! LOL Tiany ny matory sy milalao ny kilalao, indrindra amin'ny taolany. Na eo aza ny endrika tezitra na adala dia baolina feno fitiavana madio izy '
efa lehibe feno kilalao Amerikana Eskimo alika
'Dooley ilay anglisy Bulldog Pup amin'ny herinandro 8 mandeha amin'ny diany antoandro. Tiany ny maka sary amin'ny fakantsary! '
McKenzie ao anatin'ny 9 herinandro dia iray amin'ny zanak'alika Something Special an'i Si-D-Di, sary avy amin'i Anne Dampier The Si-D-Di Collection
Raha efa nanana Bulldog Anglisy ianao dia fantatrao izany fijery izany! Spike no anaran'io alika io.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Bulldog
Fampahalalana momba ny Bulldog
Sary Bulldog 1
Sary Bulldog 2
Sary Bulldog 3
Sary Bulldog 4
Sary Bulldog 5
Sary Bulldog 6
Sary Bulldog 7
Sary Bulldog 8
Sary Bulldog 9
Sary Bulldog 10
Sary Bulldog 11
Sary Bulldog 12
Sary Bulldog 13
Sary Bulldog 14
Sary Bulldog 15
Sary Bulldog 16
Alika Bulldog: Sarivongana Vintage azo angonina
boston terrier taloha anglisy bulldog mix
antsasaky ny mpiady totohondry retriever volamena
pug boston terrier afangaro alika kely
inona no karazana alika dia doxie